Axmed Madoobe iyo wafti uu hogaaminayo oo dib ugu soo laabtay Kismaayo. – Geelle Magazine
Axmed Madoobe iyo wafti uu hogaaminayo oo dib ugu soo laabtay Kismaayo.
ahmedzaki Posted On April 29, 2020
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa Goordhow dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland iyo Golihii Isbedel doonka maamulkaas ee Cabdinaasir Seerar iyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya halkas oo ay kugareen heshiis ku aadan dib u Doorashadii Axmed Madoobe iyo Khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay labada dhinac.
Gurmadki u horeeyay oo la gaarsiyay Magaalada Qardho.